a320 मेगा परिवार प्याक - त्रुटि
महत्वपूर्ण a320 मेगा परिवार प्याक - त्रुटि
11 महिना2सप्ताह पहिले #1136 by irbaz444
नमस्कार मान्छे हालै मैले A320 मेगा परिवार प्याकेज डाउनलोड गरें। यो पूर्ण रूपमा स्थापित हुन्छ तर जब म एक पपअप चयन गर्दछु भने 'त्रुटि त्रुटि आईएम' भयो र एफएसएक्स पनि दुर्घटना हुन्छ।
कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ?
11 महिना 1 हप्ता पहिले #1143 by Camwin128
A320 चयन हुँदा FSX मात्र क्र्यास हुन्छ? वा यो दुर्घटना हुँदा कुनै प्रकारका विमान चयन गरिएको छ?